Sei uchifanira kupasa iyo LPIC kana LFCS uye LFCE bvunzo? | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, GNU/Linux, Kernel
Kune nzira dzakawanda dzekushandira pamwe iyo yemahara software nharaunda uye yakavhurwa sosi, kubva pakunyora zvinyorwa kana emanyorerwo, kududzira software, kusimudzira, nezvimwe. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti munharaunda huru iyi hausi mumwezve sezvaungaita mune dzimwe nzvimbo, asi uri mumwe wedu. Yakavhurwa sosi iri kutonga uye Linux kernel masisitimu pasina mubvunzo ave anonyanya kushandiswa uye anodikanwa pasirese, kunyangwe hazvo chokwadi chekuti vazhinji vanongofunga kuti ivo vanongoisa chete 'vamwe vanopenga vanoedza kuba zvakavanzika kubva kuhurumende' kana 'boka geeks '.
Kana iwe wanga uchiteera isu, isu takanyora akawanda zvinyorwa muLxA tichitaura nezve akawanda mapurojekiti anotsigirwa neLinux, uye kune makambani mazhinji anoda kernel iyi. Ndosaka yakavezwa kubva kune chimwe chinhu chakangogovaniswa nevamwe vemakomputa hobbyist mukutanga kwema90's kune chimwe chinhu chinotyisa chaunofanira kuziva kana iwe uchida kuvandudza chinzvimbo chako chebasa kana kana iwe uchida kutsvaga basa nekukurumidza. Ndokusaka muchinyorwa chino ticha taura zvishoma nezve kukosha kwayo, zvitupa zvepamutemo zvaunogona kutora uye zvinonyanya kukosheswa neIT chikamu uyezve kuti unogona sei kutanga kudzidza ...
1 Linux muhuwandu: kuziva nezve mabasa
1.1 Waizviziva here?
2 Ndeapi bvunzo anondibvumidza sehunyanzvi?
3 Ndekupi kwandinogona kudzidza kugadzirira bvunzo idzi?
Linux muhuwandu: kuziva nezve mabasa
Iva sysadmin (system maneja) nyanzvi muGNU / Linux masisitimu anoshanda kana mugadziri unogona kuva mukana wakanaka kune tsvaga basa rakakura. Linux haisi diki inoshandiswa system, pane iyo Linux iri kwese kwese. Hautendi here? Zvakanaka, tarisa zvakakupoteredza. Kana iwe uchikwanisa kuwana komputa huru kana sevha hombe, senge iri mune iyo server purazi mumufananidzo uri pabutiro reichi chinyorwa, iwe uchaona kuti pano Windows uye macOS anoonekera nekusavapo kwavo uye mambo mukuru iLinux uye padiki padiki imwe Unix. Vhocha! Makandikurudzira, pamwe munogona kufunga kuti mhando yemuchina iyi haigoneke kune vazhinji vedu vanhu vanofa ... kana pamwe kana ukava sysadmin yakanaka rimwe zuva uchave nemumwe wavo anotarisira ...
Zvimwe iwe smarttv, smartphone kana piritsi uye kunyange smartwatch yako iva neLinux kernel kana iwe uchimhanyisa iyo Android OS, Tizen, nezvimwe. Ko mota yako? Kana iwe uine mota yakabatana, ingangove iine Linux-based operating system senge Android uye kunyangwe kana isiri mota yakabatana, mazhinji zvakare ane emagetsi masisitimu akaiswa mukati neLinux-based SoCs yekudzora traction, kushandiswa, chengetedzo, nezvimwe. . Iyo iripowo munyika yemotorsport, iyo Fomula 1 zvakare iinavo mune yavo yemagetsi control unit uye zvakare mumafekitori akagadzirwa mota idzi ... Iwo maIoT zvishandiso zvine fashoni panguva ino, kubva kumatoyi kuenda kune chero imwe mhando ye mudziyo unogona zvakare kushanda nekutenda kuLinux. Uye marobhoti? Zvakanaka, iwe wakataurawo, madrones uye marobhoti epamba senge maindasitiri nesainzi marobhoti senge iwo anoshandiswa kuNASA anoshandawo neLinux neROS.
Pamwe hongu une zvishandiso zvekushandisa kumba kumba vanoshandawo nekutenda kuLinux, uye zvakadii nezvemidziyo yako, mazhinji acho anoshanda nekutenda kwazviri. Zvichida hauna iyo yakaiswa pane yako laptop kana desktop desktop kana pamwe iwe unodaro, asi mazuva ese iwe unowana Internet masevhisi anotsigirwa nekutenda kune GNU / Linux michina yakadai seGoogle Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, etc. Hazvidaro here? Saka iwe pamwe wakamboona mafirimu senge iwo anobva kuPstrong studio ayo anoshandurwa nekuda kwemachina eLinux kana pamwe iwe waona Avatar, Spiderman, nezvimwe. Chokwadi?
Asi ... Iwe unoda here imwe data yekufunga nezvayo kupfuura Linux Iri ibasa razvino neramangwana? Okay asiri-conformist, ndinoifarira iyo nzira, saka unogona tarisa ichi chimwe chinyorwa… Makambani ese anoenderana nemaitiro aya uye vese vanogadzira zvishandiso zveLinux vanoda vashandi vanoziva kushandiswa kwesystem ino. Iwe uchiri nekusahadzika, ipapo iwe unokwanisa kuwana webhusaiti webhusaiti kana maapps uye shandisa iro rakakosha kiyi Linux, iyo nhamba yemanzvimbo inoda ruzivo rweLinux ichakushamisa iwe. Pakaradzikwa vanhu mune mamwe matunhu panguva yedambudziko, makambani mazhinji aida vanhu vakadzidziswa ruzivo rweLinux.
9 kunze kwegumi sysadmins vanoshanda izere nguva nemubhadharo wepagore unogona kudarika € 21.000 pagore.
Kubva 2013 kudiwa kwevashandi veLinux kwave kuri kuwedzera 4% pagore, nenhamba dziri padyo ne27% inofungidzirwa 2020. Parizvino uye mune ramangwana! Rangarira icho.
Uye kupfuura zvese, izvo zvazvino kudiwa kwevashandi vane hunyanzvi haisi 100% inogutsikana, ndokuti, kwakawanda nyanzvi dzinodiwa kupfuura dzave kudzidziswa pari zvino.
Pamwe waifunga kuti unoshuva basa kubva kumba, sezvo ichi chiri chimwe chinhu chinotambawo chakasununguka sosi neLinux, nekuti vazhinji vanogadzira uye nyanzvi vanoshanda kubva kumba sevari kure system manejimendi, kugadzira software uye kupa mipiro kana sedhesiki
Ndeapi bvunzo anondibvumidza sehunyanzvi?
Ichokwadi kuti kune zvakawanda zvitifiketi zviripo mumusika asi hazvisi zvese zvinokosheswa zvakanyanya, saka pano ndichaedza kukutungamira nenzira yechokwadi inogoneka uye pasina kunyengera. Vazhinji vanogona kukuudza iwe kuti kupasa bvunzo mbiri dzekutanga kuti uwane iyo LPIC-1 zvitupa kunogona kukukanganisa kurota mabasa, asi chokwadi ndechekuti hazviite. Icho chitupa chakanyanya kukosha, kunyangwe paine chimwe chakatonyanya kukosha icho chandisingatombo kurumbidza. Kugona kusarudza basa rakanaka uye kuzvipira kune izvo zvaunoda, iwe unoda zvirinani uve neLPIC-2 nezvimwewo
Iko kune zvakare zvepamutemo zvitupa izvo zvinokupa iwe SUSE kana Red Hat. Ini pachangu, ndinovaona vakanaka uye zvemhando yepamusoro, asi kana iwe uchida zano hazvisi izvo zvauri kutsvaga chero, nekuti zvakanyatsojeka kune avo ecosystems uye kwete kukwanisa kushandisa GNU / Linux nechero kugovera mune imwe generic nzira. Kana ini handioni zvakakodzera kuti ndive neCompTIA Linux +, saka, regai nditsanangure ... Hongu, chitupa chakazivikanwa chaizvo uye kuseri kwayo iCompTIA, ine mukurumbira wakawanda, asi mushure mezvose, Linux + iri zvakafanana neLPIC-1. Ndokunge, iwe unogona kuenda kunzvimbo ipi neipi inobvumidzwa munharaunda yako kuti uite imwe kana imwe uye chitupa chaunowana chakafanana mune zvese zviitiko. Asi sekutaura kwandakaita mundima yapfuura, ini ndaikurudzira zvirinani kuwedzera iyo LPIC-2 kune izvi futi, nekuti iyo nhanho yakakwira zvakakwana kuti ive sysadmin yakanaka.
Uye pakupedzisira isu tine iyo Linux Foundation yega zvitupa, kuti iwe ugone kuzviita online nekubatanidza komputa yako nechimwe chezvipo zvavanoda kutora bvunzo (Ubuntu, CentOS kana openSUSE). Mune ese mawo uchafanirwa kubhadhara, hongu, ese ari maviri eLPI neCompTIA, nezvimwe, uye iyo Linux Foundation haina kudaro. Asi mune ino kesi iwe unogona kusarudza kutora iyo LFCS, inova inonyanya kukosha, kunyangwe iri yepamusoro uye yakaenzana nezvatinazvo neLPIC, uye kune rimwe divi, yakanyanya kumberi yekusimudzira, senge iyo LFCE.
En mhedziso, Ini ndinokurudzira kuti iwe usarudze ese ari maviri eLinux Foundation neaya eLPIC (zvirinani kusvika kuLPIC-2), kunyangwe ukashinga uye uchida kuenda kumberi iwe unogona kuwana iyo LPIC-3 mune imwe yehunyanzvi hwayo. : chengetedzo, kuona, ... Navo uchave nesitifiketi chepamutemo chakakosheswa nemakambani anozoita yako CV yakawanda juicier.
Ndekupi kwandinogona kudzidza kugadzirira bvunzo idzi?
Zvino, gadzirira bvunzo idzi, kunyanya kune vemberi, iro harisi basa riri nyore. Ruzivo rwekutanga haruna kukwana kwauri, asi izvo hazvireve kuti hazvigoneke kuzadzikisa kana kuti iwe haugone. Chero ani zvake aigona kunyorera ivo. Nhau dzakaipa ndedzekuti hapana zvakawanda zvekufunda izvozvi zvitupa izvo zvakakosha. Uye kana iripo, yakawanda haina kududzirwa muchiSpanish, asi asi mabhuku kana makosi muChirungu kana mimwe mitauro. Ipapo ndogadzirira sei?
Zvakanaka chokwadi ndechekuti pane zvimwe zvakanaka zvekudzidza zvandinokurudzira uye zvese muchiSpanish:
Zve LPIC-3: iwe hapana chaunowana chakatsanangurwa.
Kune zvimwe zvitupa: hapana chaiwo mabhuku.
C2GL: Iyo kosi iyo inokugadzirira iwe kune akawanda masitifiketi mune imwe nzira, senge iyo LPIC-1, LPIC-2 uye zvakare yeiyo LFCS neLFCE, pamwe neCompTIA (hongu) uye kunyange ine zvikamu zveiyo kosi inogona shanda sekugadzirira zvimwe zvikamu kana bvunzo dzeLPIC-3. Inoumbwa nedzidziso dzePDF (ine zvigadzirwa kubva kumaVIP emabhizimusi saJon "maddog" Hall, Richard Stallman, uye nezvimwe), chaiwo michina yekudzidzira, sosi kodhi mafaira, uye sei-kumavhidhiyo. Unogona kutarisa ruzivo rwako nemabvunzo anoshanda mushure mega mega block uye nematambudziko anokubatsira kuti uongorore sezvaunodzidza. Ini ndinokukoka iwe kujoina! Inodzidziswawo online uye kubva kune chero nyika ...
Google: Icho chimwe chevabatsiri vako, iwe unogona zvakare kutsvaga ruzivo rwekuti udzidze wega, kunyangwe kune zvimwe zvakakosha zvitupa zvingave zvakakwana, inogona kunge isiri iyo nzira yakanakira vamwe.
Mhedziso, iwo mabhuku ane ruzivo rwechinyakare, nekuti zvitupa senge LPIC zvinowanzo gadziridza makore ese mashoma, uye iwe unogona kuwana zvimwe zvinhu zvisiri zvechinyakare. Kune rimwe divi, kuzvidzidzisa-wega kunokupa rusununguko rwakawanda uye wakasununguka, asi nekosi iwe yauchazogara unayo murayiridzi anoda kupindura mibvunzo yako uye ndiani anogona kukupa zano nguva dzese, pamusoro pekuve nebasa. bhegi raunosarudza kubva.
Usakanganwa kusiya zvaunotaura nekusahadzika kwako, mazano, kana mazano ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Sei uchifanira kupasa iyo LPIC kana LFCS uye LFCE bvunzo?